I-Italy - ilizwe elimangalisayo, wasinika ezininzi izitya ezikhethiweyo, ezonwabileyo ezithandekayo ukunambitha kunye nalabo abahlala kwamanye amazwe. Abaninzi bethu baqala ukusa kwethu ngekomityi yefuthe le-espresso elitshisayo, ngokuhlwa kwasemini bayadla i-spaghetti, kwaye badla isidlo se-pizza okanye i-pasta. AmaItali ngokwawo angaboni ukutya njengomsebenzi wompheki, bayicinga ukuba yiholide yobomi babo. Basenokuchitha iiyure benandipha umdlalo weesitya! Ezili-10 ezidumileyo izitya zaseTaliyane
I-Bruschetta . Le yidlo yendabuko yaseNtaliyane, ephekwe rhoqo, kwaye ithathwa njengabantu. Ngamhla, i-bruschetta yinto yokutya, edlalwa rhoqo phambi kwezidlo eziphambili, kuba kukholelwa ukuba iphakamisa ukutya. I-Bruschettes ihluke kwi-toasts kunye ne-sandwiches by the fact that before they are fried, zomekile kakhulu kwi skillet ngaphandle kweoli okanye kwi-grill grill.
Inkukhu yaseParmigian . Esi sisitya esihlwaya kakhulu, esithandwa kakhulu kwimimandla yaseSicily naseCampania. Ukuze ulungiselele esi sidlo ufuna inkukhu kunye ne-tomato sauce. Inkukhu ibhaka ehhavini kunye ne-tomato sauce yemvelo kunye nenye yeentshizi ezithandayo kakhulu zaseTaliyane - i-Parmesan ushizi.
Panini . Iphayinti isitshixo esivaliweyo okanye isanti. Bapheka i-panini kwisonka esilimanya esimhlophe, nangona amaTaliyane anqwenela ukukhetha i-baguette kule shishini. Isitya sidliwa sishushu. Ukuzaliswa kwe-panini kukhethwe ngumntu ngamnye, kodwa ukugxinwa kweklasi yinyama, i-mozzarella, i-pesto sauce kunye neetamatisi ezi-cherry.
I-panna yekati . Ekuguquleleni kolwimi lwesiNtaliyane "ikati ye-panna" iguqulelwe ngokutsho ngokuthi "i-kilisi ebilisiwe". Le dessert yaseNtaliyane isele iphumelele iintliziyo ezininzi, ngoko ke iyakwazi ukuzama phantse nayiphi na indawo yokutyela kunye nokufumanisa oko yatsho iintliziyo zabantu. "I-Panna cat" yi-dessert yaseTaliyane yaseklasini, eyenziwa kwishukela, i-vanilla kunye ne-cream. Le ncwadana enobunzima kakhulu, elula.
I-Tramezzino iyisithambisi sase -Italiyane yesicatshulwa, okanye njengoko isabizwayo, isanti, kodwa i-triangular in shape. Okukhethwa kukho ukuzaliswa kwesi sandwich kuninzi, kodwa eyaziwayo kumaTaliyane kukuzaliswa kweminqumo, ityhuna kunye neprosciutto.
I-Prosciutto yinyama yesiTaliyane yeklastiki eyenziwa kwimizi. Gubha kuphela ngolwandle ityuwa kwaye akukho nto.
Tiramisu . Le dessert yaseNtaliyane inqobile uthando lwabaninzi abathandekayo, kwaye liye linye yezona zinto zithandwa kakhulu emhlabeni jikelele. Izithako eziphambili ze dessert zikhofi, kaninzi zisebenzisa i-espresso, i-mascarpone ushizi, iswekile, amaqanda enkukhu kunye ne-covo sadiyardi.
I-covoyardi ii-cookies iibhasiki zebhasiki ezingathengwa ngokulungelelanisa, okanye unokuzipheka.
I-Tortellini yi-dumplings yama-Italiyane. Bawulungiselele kwintlama kunye noshizi, inyama kunye nemifuno. Ngendlela yayo, ama-dumplings aseTaliyane asikhumbuza ngamadonki amancinci. Yenzele ngendlela yamasongo okanye amaqabunga, ukudibanisa ndawonye iikona.
I-Lasagna ithathwa njengesidlo samasiko saseNtaliyane, esilungiselelwe kwi-pastry. Phakathi kwamacandelo enhlama atyebile kakhulu, eyanelisayo ukuzaliswa kwawo, aze athulule ngokubanzi kunye ne-bechamel sauce. Njengoko sele kuthethwe ngazo, iindawo ziba luncedo lwakho, ezivela kwi-inyama enqabileyo kunye nenyama, imifuno, isipinashi, utamatisi, njalonjalo, kunye ne-parmesan cheese yongezwa.
Spaghetti . I-Italy yindawo yokuzalwa yale pasta, kwaye apho ihlala ikhonzwa ne-tomato sauce. I-spaghetti sele isiseko sezoninzi ezininzi ezidumile zaseNtaliyane. EItali, igama elithi "spaghetti" alikho nje i-noodle, kodwa luhlobo oluthile olucacileyo lwepasta yaseItali.
Pizza . Ewe, ukuba ungakhankanyi kuluhlu lweetytile ezidumile zaseTaliyane, kuya kuba yiphutha. I-pizza yaseNtaliyane ikhekhe evulekileyo evulekileyo ihlanganiswe neetamatati kunye noshizi ecibilikileyo, kaninzi ikhetha i-mozzarella-le nguqulelo yeklasi ye-pizza yaseNtaliyane. Ngoku i-pizza iphekwe ngokuqhelekileyo kuwo onke amazwe ehlabathini, kodwa wonke umntu ukhetha ukuzifaka.
Izidlo zaseNtaliyane zinezixhobo ezicocekileyo, ezihlwaya kwaye ziwayo. Abaninzi babo upheka ekhaya okanye umyalelo kwiivenkile, ngesiseko salo singatsho ukuba ukutya okuseNtaliyane kuyathandwa kakhulu kwaye kunabalandeli bayo.
Iipropati eziwusizo zesilonda kunye nokusetyenziswa kwayo kumachiza omntu
Inyama yomlenze: inzuzo kunye nengozi
Ioli yeoliva - iimpawu zonyango
I-Gymnastics ne yoga yabasetyhini abakhulelweyo
Indlela yokusetyenziswa kwamacandelo eyeza
I-Pizza kunye neentlanzi zaselwandle
Ingubo yomkhosi yesimo
Indlela yokunyamekela ubucwebe ngeeparele
Iintlobo zeetafile ze-buffet kunye neziphi izitya zokusebenzela kuyo
Abadumileyo abadumileyo kwimbali
I-cookie i-vanilla nge chocolate
I-horoscope yamaRoma ngo-2014: ukufuna uthando
Ikhrimu yomzimba okhuselayo
I-kroti kunye nesaladi yekhakhamba
Izinwele ezithandekayo zixhobo zokukhohlisa
Ukusetyenziswa kweFitball, umthwalo ophezulu